ISTIRAATIIJIYADA LA’AANTA SOOMAALIDA MAXAA NOOGA LUMAY?!
Sida loogu wareersan yahay halka Soomaalidu asalkeedu ka soo jeedo Ma carab baa mise waa Afrikaan ayay umadani dhexdeeda isku wareersan tahay.., sida Soomaalida iyadoo isku dhaqan, af, diin iyo midab ah u kala irdheysan tahay oo towfiiqda looga qaaday ayay u ayaan darran tahay mar waliba.
Ilaa jiritaanka Soomaalida inta la ogyahay bal dib u fiiri…, taarikhdii Axmed Gurey iyo Geeska Afrika halgankiisii halkee ku danbeeyay..?, Sayid Maxamed C/lle sow awoodii gumeysigii Ingiriiska laguma tijaabin?, xornimo-doonkii, Shantii Soomnaali loo qeybiyay AFIS ugu danbeysay sow Talyaaniga oo dagaalkii labaad ee dunida ku jabay nalooma dhibin..?.
Dowladii ugu horeysay ee Jamhuuriyadda Soomaaliya sow howsheedii koowaad kama dhigin soo celinta Gobollada maqnaa iyo SOMALIWEYN raadinteed..? dowladii Kacaanka sow dagaal uma gelin soo celinta Somali Galbeed..?.
Ayaan darrada Soomaalida waa istiraatiijad la’aan iyo qorshe xumo ay ku lamaanan tahay daneysi iyo ku takrifal, waa marka horee umad ahaan Soomaalidu maaha dad xaraadad fog leh aqoonta diinta, maadiga iyo tan dowliga ahna aad abay ugu liidataa, tusaale ahaan sidii aanu dunida ugu noolaan lahayn ayaan kari weynay, waxaan nahay dalka kaliya ee dowlad la’aanta ah, 46 sano markii uu xor ahaa kadib dowladnimo hanan waayay oo caddowgiisii qabsaday.
Aan taariikhdeena istiraatiijad la’aaneed soo koobo:
DOWLADII KACAANKA (Gen. Maxamed Siyaad Barre)
Soomaalinimadii na madax martay iyo jaceylkii Shanta Soomaali oo isu timaada waxay keenaan inaan awoodda saarno dhisme ciidameed oo dhaqaalaha ugu badan lagu bixin jiray, saddexdii Gobol ee maqneyd waxay kala ahaayeen sidan:
NFD: Gobolka Soomaalida ee Kenya la siiyay waxaa daah saaray oo arrinkiisa in xoogga la saaro mugdi geliyay is fahamkii Cigaal iyo Jomo Kenyatta, oo la oran karo qeyb ayuu ku lahaa dhalashadii Kacaanka 21-ka Oktoobar.
JABUUTI: Faransiiska ayay gacantiisa ku hartay wax dareen ahna ma saarneyn oo inay xoroobeyso waa soo muuqatay jiho ay aadaba.
Somali Galbeed: Gobolka Itoobiya la raacsiiyay ee Soomaaliyeed ayay qadartu noqotay in la wajaho, jabhado lagu kiciyo ilaa markii Jamhuuriyadda Soomaaliya markii danbe dagaalka si buuxda u gashay.
Dowladii Soomaaliyeed khaladaadka istiraatiijiyeed ee gashay waxaa ugu weynaa qiimeyn la’aanta xaaladda markaas jirtay: saameynta Itoobiya ee siyaasadda dibadda. Kala guurkii dowladda Soomaaliya iyadoo WARSO ka mida ay NATO ugu wareegtay iyo arrimo kale GALBEED WAA LA XOREEYEE WAARSAA GAAGIXISAY.
Natiijadii waxay noqotay in Soomaalida dhexda ku lunto: Mareykankii ay u wareegtayna waxba u qaban waayo, WARSO-na ay Itoobiya la safato sidaana ciidamadii Soomaalida lagu buburiyo jab xunna ka soo haleelo, arrintaasina waxay ahayd BILOWGII BURBURKA JAMHUURIYADII SOOMAALIYA.
Maalintaasi haddaan qiimeyn kari weynay xaaladda dunida oo dalal maqan oo aanu soo celino iska daaye lafaheenii ku qamaarnay.., waxay ahayd in dib loo fiirsado laakiin maxaa ka dambeeyay..? .
Jabhadihii kacay ee sumadda Soomaalinimo yeeshay waxay mid waliba salka dhigatay Itoobiya iyadoo qorshaheedu yahay inay rido taliskii Kacaanka iyo dowladii Maxamed Siyaad, istiraajiiyad kale Buuggaba uguma qorneyn…, maxaa dhacay Jabhad waliba beel ayay noqotay sida SSDF oo u xuubsiibatay Majeerteen SNM oo noqotay Isaaq iyo USC oo Hawiye ahayd, kuwo kalena waa jireen.
SSDF seeftii xoogga lahayd ee Kacaanka ayaa kala tuurtay, SNM-na awoodii dowladnimo ayaa lagula dul dhacay, USC-na way u danbeysay.. laakiin xarfahaasi beelihii aan soo sheegay ayay u taagnaayeen ilaa haddana loo yaqaan. Markii Maxamed Siyaad meesha ka baxay istiraatiijad la’aantooda jabhadihii beelo ayay u qeybsameen dagaalo sokeeye ayayna isla galeen.
Waxaa nasiib darro bilowday dagaallo sokeeye oo Soomaaliya ka dhigay hoyga dhimashada, gaajada, dowlad la’aanta, qaxootiga darxumada iyo ixtilaalka, waxa ugu wanaagsan ee burburka ka soo dhex baxay waxaa la oran karaa waa Somaliland oo haba sheegato dowlad madax bannaane wax uun maamul u egi ka jiro, is maqal xoogaa ahna laga helay.
Dowladii Maxamed Siyaad waxaanu ku bedelnay dal qabqableyaal isku heystaan oo tobanaan imaaradood iyo beelo u kala qeybsan, nidaamkii hantiwadaagga waxaanu ku bedelnay isuma-taliso iyo fowdo, Soomaalinimadii waxay ka badin weysay inaanu beel beel isu dilno.
Qarankii jabay, karaamadii luntay iyo dadkii kala tegay ee isla noolaan waayay.., waxay mar labaad garan waayeen sida dunida loogu nool yahay kadibna karkii karay ee karkaarada jebiyay wuxuu umiliyay inay wadaado (Maxkamadihii Islaamiga) caasimadii la wareegaan meesha ka saaraan qabqableyaashii 15 sano ku ilmo dhalatay ee Koonfurta Soomaaliya kala qeybsaday.
Dagaaladii sokeeye markii ay socdeen sanad wax yar uun ka badan waxay Soomaaliya isu bedeshay dal burburay iyo dad dhammaanaya oo tarab tarab u le’anaya. Dunidii xaaladaas ka damqatay waxay Soomaaliya kadhigtay mid loogu soo gurmado sidii loo badbaadin lahaa, loona quudin lahaa Soomaalida dhammaanaysa ee Soomaalida kale laga siin waayay gargaarkii… aan is weydiinee caga-bararkii iyo gaajadii kalabar Soomaalida qarka u saarantay inay u dhammaato yaa sababteeda lahaa.., Kuwii wadooyinka xirtay ee Baydhaba ka dhigay magaalada dhimashada una diiday in dadkaas ay macaluuliyeen ee ka haray kuwii ay laayeen gargaar la gaarsiiyo haddii ay markaas kadib arrintii jihaad u bedeleen iyo gaallo la dirir waxay ahayd tijaabo aan soo marnay.
Fursadaas noocii ay doonto ha loo dhigee iyaduna waxay ahayd istiraatiijiyad xumo lagu waayay dadaal kale oo Soomaaliya looga soo saari lahaa godkii dheeraa ee ay ku dhacday, mana laga faa’iideysan ee isla dabinkaas ayaanu ku soconnaa.
Maxkamaduhu waxay taageero ka heleen dadweynaha Muqdisho oo kadib xukuumadii Siyaad Barre ku soo jiray cadaab iyo kadeed aan la qiyaasi karin… waxayna taageeradooda la mid ahayd tii la siiyay Jabhadihii kacay siiba USC oo Muqdisho ugaa danbeysay dowladii Maxamed Siyaad Barre, laakiin ma jirin qorshe ama Istiraatiijad ay Maxkamaduhu ku talo jireen ama hayeen… xitaa iyagii ayay qaadan waa iyo la yaab ku noqotay inay ka guuleystaan qabqableyaashii Muqdisho..!!!.
Dad badan oo aqoonyahanno iyo nooc waliba leh ayaa la taliyay madaxdii Maxkamadaha kuna booriyay inaysan fursadan lumin, Soomaaliduna markan ay u dhow dahay in dowladnimadeedii la soo celiyo, laakiin caadadii hore ayaa dib loo raacay oo caadifadii soo celinta Somaliweyn waxaa lagu bedelay caadifad kale oo ah JAMHUURIYADDA ISLAAMIGA SOOMAALIYA.
Raas-kaambooni ilaa Gaalkacyo maxaa inoo dhiman ayay xisaabtii noqotay, rag madaxdii Maxkamadaha ka mid ahaa oo kheyrka jecel ayaa iftooday, Baydhaba barqa cad ayaa lagu tegayaa, kadibna Puntland iyo Somaliland ha is dhiibeen haddii kale DAADKAA QAADAYA..?!.
Laguma waaya aragnimo qaadan taariikhdaas fashilka ah ee aanu soo marnay. Lama akhrin waayaha dunida, xisaabta laguma darin xaaladda dunida ka taagan iyo waxa dhacaya (Afghanistan, Ciraaq, iyo Lubnaan), waxaanu ka dhaxalnay xaaladda aanu maanta ku jirno ee gunta hoose aanu fadhino.
Micnuhu maaha inaan khaladka oo dhami anaga leenahay, mana aha inaysan macquul ahayn dhismaha dowlad islaami ah oo Soomaaliya yeelato shalay, beri iyo Saa-dambe, laakiin waxaa muhiim ah inaad akhrin karo siyaasaddaha saddexda maran ee aad ku dhex nooshahay, inaad abuuri karto jawi aan ku noolaan karto adiga kuna jiri karto adigoon u gudbin deriskaada.
Danaha Mareykanka iyo madaxweyne Bush Soomaaliya ka leeyahay iyo danta Itoobiyada Meles Zenawi anagaa mideynay sanadka 2006-da oo isku qasabnay sidii aan sameynay 1977-kii oo aan u mideynay danihii WARSO ee Midowgii Soofiyeeti iyo Itoobiyadii Mingistu, meelaha aysan Soomaalidu iska bedelin ee falanqeyta u baahanna waa halkaas (Hoggaamiyeyaashii Maxkamadaha 2006-da iyo Gen. Siyaad Barre isku ujeedo iyo hadaf ma ahayn laakiin waxay ka sinnaayeen Istiraatiijiyad la’aan iyo qorshe xumo).
Kadib markii ciidamada Itoobiyaanka dalka qabsadeen aakhirkii sanadkii 2006-da (Markii caddowga loo jabay Culimadiina yaaceen), haddana qorshe xumidii suuragelisay guuldarradaasi weyn way sii socotay, wayna ka sii dartay Istiraatiijiyad xumadeena ilaa heer aan gaarnay inaan isku qabsano bixitaanka Itoobiyaanka iyo qaabka ay tahay in dalka looga saaro.
Kuwii keenay (TFG-da) ayaa isku khilaafsan, kuwa dagaalka kula jira ayaa isku khilaafay umadiina kuwaas ayay ku dhex luntay. Dhamaantood sow uma adeegayaan inay sii joogto…???!!!. Haddii Soomaalidu is heysato, la isku heysto, lana kala heysto yey faa’iido ugu jirtaa..??. Istiraatiijiyad xumada salka na dhigatay ee aan ku luminay qaranimadii, isku dilnay welina qarka u saaran nahay inaanu inta dhiman ku weyno sideen uga dawoobi karnaa?.
Waa su’aal adag, laakiin aan is weydiinee kumanaanka NGO ee xilligan dal dibad Soomaalidu ka dhiseen maxaa looga heli waayay urur, xarumo ama machadyo istiraatiijiyadeed oo umaddeena haga, kala taliya masiirkooda iyo danahooda?. Boqolaalka aqoonyahan ee ku nool dibadda qaarkood wax ka dhiga Jaamacadaha Waqooyiga Mareykanka iyo Yurub ma awoodi waayeen inay mar uun isu yimaadaan oo hanaan qaran u fekeraan ama dhisaan isu tagyo Soomaalida loogu jeexayo hannaan ay dowladnimo ku gaari karto.
Yaa maanta sheegi kara oo noo haya qaab aan ku qeybsan karno dowladnimada oo aan ahayn Qabiil iyo Gobol? Waxaasi oo su’aalo ah waxay ku wajahan yihiin inta aqoonta u leh ee ka damqaneysa haadaanta ay Soomaali ka sii laadlaado iyo inta ay ku harsan tahay dadnimo iyo damiir wadaniyeed, bal aanu isla sahmino walaalayaal.
Maqaal kale oo ku saabsan ISTIRAATIIJIYAD XUMIDA MAXKAMADAHA (MUQAAWADAMADA) oo xasaasi ah filasho wacan… Insha Allaah.